Razafindrakoto Sarindra- MADAGASCAR - Gender Links
Drivers of Change Razafindrakoto Sarindra- MADAGASCAR...
Razafindrakoto Sarindra- MADAGASCAR
Nantsoinay sefom-pokotany teo aminay izahay ary nanambara fa misy fiofanana mikasika ny miralenta sy ny zoan’ny vehivavy ka mandehana eny amin’ny C.O.M tamin’ny fotoana voatondro ka olona 4 izahay no nahazo fiantsohana ary ny iray tsy nanao fa tsy afaka noho ny tonga teny satria tsy tiany hono le fanadiadiana natoany ekipan’ny GL izay nataony Mme Claudia sy Mr Zoto nefa izy hono mazoto fa le fanadiadiana no tsy zakany .Nanomboka tamin’ny fomba fiainana ao an-tokatrano sy ny herisetra nahozo ahy ka nontarahiko azy ny olana satria tena niharany ny herisetra tokoa aho taloha noho ny vadiko tsy manome vola hividianana sakafo ary izy mamo lava vao miditra antrano ary ny nanirian’ny anay mianaka ankolaka ny tena koa tamin’izay tsy mbola nanana antonasa ka izany angamba no nahatonga azy nanao herisetra tamiko Ary noraisin’ izy ireo antsoratra izay tanatarampiainako nanaovana fanadihadiana.
Tena naharitra ny fanadihadiana , nandaha ny fotoana ka nahazo fiantsohana manaraka izahay ka tao amin’ny C.O.M Bongatsara teo amin’ny 25 vehivavy teo izahay no namaly ny antso ary nanao fanadihadihana tsirairay izahay Ary nanao asa tarika fiofanana voalaohany ary niarahana taman’ny ekipan’ny Bongatsara .
Ary naharitra telo andro teo ny fiofanana ary nahitana zavatra maro toy ny asa fandraraharahana ny fomba ialana amin’ny raiky tapisaka. Nefa izy ireo koa tsy mijery fotsiny fa mba manome solo-paladia izay nivezivezena. Ary afaka iray volana indray dia hiverina indary saingy tany amin’ny toerana iray izay miala ny tanana dia teto Antananarivo , tao amin’ny FIARO nianatra ordinateur na solosaina ary tena ita fa mahafinaritra ny mahay zavatra nadrita ny 2 andro vita ny fiofanana dia nahazo solompaladia.
Ny mpitarika aloha dia manao ny aina tsy ho zavatra satria niezaka nanome ny tsara avy amin’ny izy ireo ary nanam-pita izany tamin’ny mpiofana tsirairay, ary zahay koa nandray tsara ny fifanana ary nampiantra ka ita fa nahomby dia izay no nahitako fa mitondra fanovana izy ireo no sady mampandroso ny vehivavy hiarany herisetra
Naitana traikefa tao anatiny fiofanana toy ny fomba fitantanana fandraisana andraikitra ary fanaovana asa mahaleo tena , manao yaourt à boire no asa ko teo aloha somary nanahirana ny fomba fivarotana nefa kos a htramin’ny niarahana tamin’ny GL dia nisy fiovana satria lasa niatsara saingy tsy nitohy izany taty aoriana satria lasa any amin’ny toerana tsy misy herinaratra izahay no mipetraka dia nivadika nanao frezy izahay hoe mamboly frezy satria izay ni ita fa mahavlelona no mifanaraka amin’ny fiofanana no izay koa no fotompivelomana an’ny amin’ny farita misy anay .
Niaraka tamin’ny GL araka ny voalaza tao ambony izay ny fotoana niarahana tamin’ny lesoka aloha dia hita fa niova fa tsy dia mbola manana traikefa ratsy efa nahazo fiofanana tsar izahay hoe avy aminay ny lesoka ary ny GL no nanariana, ny izany avy amin’ny alalany fiofanana, ohatra teo amin’ny , ara bola tsy mbola mahay nanatanteraka ny fiofanana , ary tsy mahay mifehy tena fomba fitanatanana teo aloha. Nanao serasera tamin’ny GL no nahafahako nanarina any zany. Ny fiovana hitako tamiko aloha dia lasa nanana fahasahiana ary lasa nanana risika bebe kokoa raha hoarina taminy izaho tsy mbola fiofanana kanefa nisy fiovana anefa taty aoriana raha nampianatra ny fiofanana GL.
Ny anjara biriky netin’ny dia ny fanomezana mpitatsorika mba hanaramaso ny zavatra hatao ary nanome fiofanana maharitra sy ny fanaovana tatitra izay atao ny mpitatsorika.
Ny fiovana nisy teo amin’ny traikefa ny fahaizamanao dia ny fijeriny olona ny entana amidy sy ny fahaizana mandray antsoratra ny fizotrany ny vola miditra sy ny mivoaka ary fandrindrana izany mba tsy hisy fantiantoka mba hampiroborobo ny orinasa sady ita fa niavaka ihany koa ny nahazo fiofanana noho tsy nahazo
Ny porofo dia efa itan’ny teny antoerana ny fizotran’ny asa mba tsy hisiana’ny fiofanana zavampoana.
Nisy ny fiovana tao amin’ny fiofana satri nizotra tsara ny fiainanay. Ny fianakavianana sasany ary tena resy lahatra amin’ny fiasany GL rehetra fa tena tsara ary ita fa tena miampita an’ny amin’ny fon’olona rehetra.
Ny fianakaviana koa moa tena liam-baovao ka manaraka tsra ny fizotrany Eny tena nisy tokoa satria gaga izy ireo nahita ny fiovako.Fankaherezana ireo vehivavy mba tsy ho Fankaherezana ireo vehivavy mba tsy hofiainana Ny fiovam-piainako ary efa voatatitra tany amin’ny GENDER LINKS izany.
Olana ara –tokatrano sy ara –bola fa efa nivaha izany noho ny nanarahako fiofananana tamin’ny Gender Links
Ny dingana ataoko mba hiezahako dia ny mba hatsaratsara kokoa hatrany ny fiainanko.
SADC: Call for media stories on Gender and COVID-19
Activists demand apology over remarks on Joyce Banda
Low income earners affected most by COVID-19
Tarisai on Activists demand apology over remarks on Joyce Banda